I-Smurf Shack - I-Airbnb
Ubekwe ogwini lolwandle olulalayo uzothola 'I-Smurf Shack' - Le yindawo ephelele hhayi i-Bach engxenyeni engemuva yomuntu. Ukuphunyuka okuphelele emuva kulezo zinkumbulo ze-sepia zeminyaka edlule. Inamakamelo okulala ama-2 ngaphakathi, indawo yokulala, indawo yokulala emboziwe, isiqandisi segaraji, ibha ye-tiki engaphandle/umgodi wesanti konke kungxenye enkulu ebiyelwe ngokugcwele.
I-Bach yincane ngosayizi kodwa inkulu ngohlamvu. I-Funky decor, ecwebezeliswe kabili ngokugcwele ku-Bach, ifakwe ezindongeni kanye ne-heatpump/aircon entsha. Bekubalulekile kithina ukuthi i-bach isenomuzwa oyiqiniso we-kiwiana bach ngenkathi inakho konke ukunethezeka kwesimanje esikudingayo kulezi zinsuku. Kukhona i-wifi ne-smart TV okusho ukuthi ungahlala uxhumekile futhi usebenze ukude njengoba kudingeka.
I-Bach ihlanganisa umbhede weNdlovukazi ekamelweni elikhulu, kanye nombhede omkhulu ekamelweni lesibili elinombhede ophindwe kabili phansi nowodwa phezulu. Kukhona nendawo yokulala ngemuva kwengadi enompheme omncane, umbhede ophindwe kabili kanye ne-heater. Ilineni elisha, amaduvethi, imicamelo namathawula kunikezwa zonke izihambeli.
Kubiyelwe ngokugcwele izingane nezinja (sicela ubuze kuqala, (akukho makati avunyelwe) futhi indawo yokuzijabulisa yangaphandle nengadi iyimfihlo kakhulu futhi iyindawo enhle yokusebenza noma yokuphumuza umoya.
Izingane? Kukhona i-porter cot, isihlalo esiphezulu kanye ne-pram egaraji enamathiselwe kabili uma uthwele ingane nojahidada. Kukhona namabhayisikili ezingane namathoyizi olwandle namathawula olwandle.
Isekelwe ku-Cul-de-sac impela. Ithrekhi yompompi, ukuhamba komfula, izinkundla zethenisi nezinkundla zokudlala ziwuhambo olufushane lwemizuzu emi-5, nemizuzu engu-7 ngaphezulu ukuya e-Ocean Beach Eatery kanye nolwandle. Ncoma ukulahleka ezindundumeni zesihlabathi ezinkulu. Kusukela ekugcineni kwe-Cousins Ave kukhona amathrekhi okuhamba ngezinyawo kanye namabhayisikili futhi uma uhamba uqonde endaweni yotshani usuka endaweni yokupaka kukhona uhambo oluhle olunqamula ihlathi likaphayini nezindunduma zesihlabathi ukuya ebhishi.
Sikushiya ukuthi ujabulele impahla ngokuthula kodwa zihlala zitholakala ngocingo/i-imeyili/umbhalo nganoma yiluphi usizo ongase uludinge.